Niteraka Fihetsiketsehana Ny Volavolan-dalàna Famotsoran-keloka ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Niteraka Fihetsiketsehana Ny Volavolan-dalàna Famotsoran-keloka ao Thailandy
Voadika ny 06 Novambra 2013 1:09 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, srpski, Deutsch, English
Hetsi-panoherana ilay Volavolan-dalàna Famotsoran-keloka ao Bangkok. Sary avy amin'i George Henton, Copyright @Demotix (8/7/2013)
Voalaza fa natao hampiroboroboana ny fampihavanam-pirenena ao amin'ny firenena ny Volavolan-dalàna Famotsoran-keloka ao Thailandy, saingy mety hampididoza hampitombo ny adilahy politika ny fanoherana ity fanapaha-kevitra ity.
Natolotra ny volavolan-dalàna tamin'ny voalohany mba hanomezana famotsoran-keloka faobe ho an'ireo nahavita heloka politika nanomboka tamin'ny taona 2006, indrindra indrindra ho an'ireo olo-tsotra (fa tsy mpitarika politika) izay nandray anjara tamin'ny famoriam-bahoaka sy fihetsiketsehana ara-politika.
Saingy nanitatra izay ho voakasiky ny fanapaha-kevitra ny fanitsiana ny andinin-dalàna novolavolaina. Nampilaza mialoha ireo mpitsikera fa hahazo famotsoran-keloka ihany koa ireo mpanao politika, miaramila jeneraly, polisy manampahefana voaheloka noho ny kolikoly sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Indrindra koa fa nilaza ny mpanohitra fa ‘hamafa tanteraka ireo heloka vitan'ny Praiministra teo aloha Thaksin Shinawatra, izay nitsoaka niala tao amin'ny firenena rehefa voaheloky ny fitsarana ho nangalatra ilay volavolan-dalàna.
Voahongana tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2006 i Thaksin. Ny anabaviny faravavy, Yingluck Shinawatra, no praiminisitra ao Thailandy ankehitriny. Araka ny filazan'ireo mpanaratsy an'i Thaksin, hahafahan'ity praiminisitra teo aloha ity hiverina ao amin'ny firenena sy haka indray ny harenany izay efa nogiazan'ny governemanta ny volavolan-dalàna.
Ny mahaliana amin'izy ity dia notsipahin'ireo mpiaraka amin'ny governemanta ihany koa ity volavolan-dalàna famotsoran-keloka ity, anisan'izany ny “Lobaka Mena”. Mahatsapa ho “voafitaka” ity vondrona ity satria hanome famotsoran-keloka ho an'ny praiminisitra teo aloha Abhisit Vejjajiva (Lehiben'ny Antokon'ny Mpanohitra Demokraty ankehitriny), izay voarohirohy ho nanome baiko tamin'ny famoretana mihoson-drà tamin'ny hetsi-panoherana ny governemanta tamin'ny taona 2010 ihany koa ny volavolan-dalàna. Mpikambana an-jatony eo ho eo tao amin'ny Lobaka Mena no namoy ny ainy nandritra ny fanaparitahana feno herisetra natao tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny taona 2010.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, notsikerain'ireo vondron'ny mpanohitra sy ny mpanohana ny governemanta ny volavolan-dalàna.
Namariparitra ny Bangkok Pundit fa mivelatra loatra ireo fepetra maromaro amin'ilay fanapaha-kevitra (famotsoran-keloka):
Midadasika loatra ilay izy ary afa-mandray ireo fotoana samihafa nahitana heloka bevava. Sarotra ny hahazo fanazavana lavorary, saingy ny famaritana ireo heloka sasany tafiditra ary ny heloka hafa tsy tafiditra ao anatin'ny volavola no mety hanavaka kokoa ireo tafiditra sy tsy tafiditra ao anatin'ny famotsoran-keloka.
Hiteraka voka-dratsy ara-politika ny volavolan-dalàna, hoy i Anuthee Dejthevaporn:
Raha lany ny “Famotsoran-keloka ho an'ny Rehetra, hevero sahady ireo voka-dratsy mety haterak'izany. Inona no holazain'ireo zanatsika, indray andro any raha sanatria maty noho ny adilahy politika amin'ny hoavy ihany koa izy ireo ary tsy maintsy hiady ho amin'ny rariny indray izy ireo manokana? Inona no holazain'ny zanatsika, raha fantany fa isika, ray aman-dreniny, dia afaka nanao zavatra betsaka amin'ny fametrahana ny tena rariny ao amin'ity firenena ity ho azy ireo, saingy indrisy, tsy nataontsika izany?
“Ny Firenena”, gazety voalohany mpivoaka isan'andro ao Thaïlandy, nanazava ny antony mampisara-kevitra noho ilay volavolan-dalàna.
Why is it that a “reconciliation” plan advocated by the ruling party is threatening to tear the country apart? The answer is simple: The government's legislative moves do not seek to rectify the root cause of Thailand's strife, but are amplifying it instead.
Efa maro ireo olana ao Thaïlandy, tsy lazaina intsony ny enta-mavesatra noho ny hetsika ara-politika izay mbola hampitombo ny fizarazarana ao amin'ny firenena.
Nahoana ny tetikasa “fihavanam-pirenena” handrandrain'ny antokon'ny fitondrana no ahiana mety hamotika ny firenena? Tsotra ny valinteny: satria tsy mikendry hamaha ny tena fototry ny fifanolanana ao Thailandy ny lalànan'ny governemanta, fa manamafy izany indray aza.
Naneho hevitra momba izany ireo mpisera Twitter amin'ny fanasongadinana ireo teboka mampifanolana amin'ny volavolan-dalàna.
Mitarika any amin'ny fihavanam-pirenena ny Volavolan-dalàna Famotsoran-keloka? Mbola lavitra izany – fa na dia ireo mpanohana ny governemanta aza manana hevitra tsy mitovy mikasika ny famotsoran-keloka faobe.
Ao anatin'ny fandinihana fanindroany ny volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka manimba ny Antenimieran-doholona, izay mety hampody an'i Thaksin sy mamela azy hamerim-bola.
Amin'ny alalan'ny volavolan-dalàna #amnesty famafana heloka faobe, avadiky ny antoko Pheu Thai ho firenena atoka-monina (paria) tsy manaja ny rariny sy ny zon'olombelona i #Thailand.
Letter from Ministry of Interior ordering provinces to put up signs supporting Amnesty:​​ pic.twitter.com/QOnjolL6g3” via @LiShuhui & @ThePongk
Taratasy avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany manome baiko ny faritra mba hametraka marika fanohanana ny Famotsoran-keloka
Taorian'ny adihevitra naharitra 19 ora, nankatòavin'ny Parlemanta tamin'ny voalohan'ny volana Novambra ny lalàna. Araka ny efa nampoizina, nandao ny adihevitra ny mpanohitra. Handinika ny volavolan-dalàna kosa ny Antenimieran-doholona amin'ny herinandro ambony.
Nisy avy hatrany ny fihetsiketsehana nokarakaraina izay nahazo olona teo amin'ny 10.000 teo. Mahavariana, nampanantena ny governemantam-paritra ao Bangkok fa hanampy ireo mpanao fihetsiketsehana ka hanome toeram-pivoahana azo hafindra sy jiro manazava fanampiny mandritra ny hetsika.